Peace, Death! အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
4.7 | 500,000+ ထည့်သွင်းရန်
၏ဖော်ပြချက် Peace, Death!
ငြိမ်းချမ်းရေး, သေခြင်း! အခက်အခဲများနှင့်အတူ Arcave Simulator ဖြစ်ပါတယ်။ ဤဂိမ်းတွင်သင်၏သူဌေး, သေခြင်း,
အင်္ဂါရပ်များ။ သူမ, သူမသို့မဟုတ်၎င်း၏ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်ရန် client တစ်ခုစီ၏အင်္ဂါရပ်တစ်ခုစီကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ နေ့တိုင်းအင်္ဂါရပ်များပိုမိုများပြားလာပြီးဂိမ်းသည် ပို. ခက်ခဲသည်။ သင့်ရဲ့ client ကိုတစ် ဦး ပစ္စတိုကိုင်ထား? သူစိတ်ပြောင်းပြီးလက်နက်များမပြောင်းလဲပါကသူ့ကိုငရဲသို့ပို့ပါ။ သင်၏အမှုသည် ဦး ထုပ်ချစ်သူလား။ သူ့ကိုကောင်းကင်သို့စေလွှတ်သင့်သလော။ မဟုတ်ပါ, ၎င်းသည်မလွယ်ကူပါ။ ဦး စွာ ဦး ထုပ်ကိုယူပါ, သင် ဦး ချိုများကိုတွေ့လိမ့်မည်။ နတ်ဆိုးစွဲသူ, လူသတ်သမားသို့မဟုတ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးဖြစ်ခြင်းလည်းပါ0င်သည်။
Bavectroisters ။ ၎င်းတို့သည်ထူးခြားသောဖြစ်ရပ်များဖြစ်သည်, ၎င်းတို့သည်မမျှော်လင့်ဘဲနှင့်လျင်မြန်သောကြောင့် Reaper ကိုအချိန်ကဖိအားပေးသည်။ သို့သော်သင်သည်ဖောက်သည်များကိုကပ်ဘေးကြီးတစ်ခုဖွင့်ရန်နှင့်ဖောက်သည်အသစ်များကိုသော့ဖွင့်ရန်နှင့်သေခြင်း၏သြဇာကိုတိုးပွားစေရန်ဖောက်သည်များကိုမှန်ကန်စွာခွဲဝေချထားရမည်။ ကံမကောင်းသည့်ပင်လယ်ဓားပြများသည်ဆိုက်ဘေးရီးယားတွင်ပန့်တိုရောဂါကူးစက်မှုကိုဝက်ဝံဖြင့်ဝက်ဝံဖြင့်ဝက်ဝံဖြင့်အခမဲ့ဟင်းချိုအတွက်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အပတ်တိုင်းသင်ဖြစ်ရပ်အသစ်တစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။ သင်အလုပ်လုပ်ခဲ့လေ, သင်၌ဖြစ်ရပ်များလေလေဖြစ်သည်။ TRAINES ၏ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ, မှောင်ခိုတင်သွင်းထားသောကုန်ပစ္စည်းများ, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အခက်အခဲအချို့ရှိကြသနည်း။ ဘာကြောင့်ဟင်းချိုကိုတောင်ချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်။
The The The Thats ။ သတ္တမနေ့တစ်ခုစီသည်နေ့ဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်ထားသည့်အခင်းအကျင်း၏စိတ်ဓာတ်နှင့်သက်ဆိုင်သောထူးခြားသောတေးသံများအတွက် clients ၏ကံကြမ္မာကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်။ အီဂျစ်လား သေချာတာပေါ့! အမေ nostrovia! ပင်လယ်ဓားပြနေ့လား yo-ho-ho!
ဘာ? မြင်းစီးသူရဲများ, ရယ်စရာဖောက်သည်များ၏စကားစုများ, ကိုးကားချက်များနှင့်အီစတာကြက်ဥများ, အပိုဆုကြေးများ, :
ထာဝရဂိမ်း။ မင်းမေးခဲ့တယ်, မင်းမေးခဲ့တယ်။ မင်းအလုပ်ခွင်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့ကံကြမ္မာကတ်တစ်ရာကျော်။
New Cathastrophes ။ Inquisitors, အရူးကျမ်းများ, သဲကန္တာရကျွန်းနှင့်ကပ်လျက်ကျွန်းတစ်ကျွန်းပင်! clies အသစ်များ။ နာမည်ကြီးနှင့်မသိသော။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်တိုက်ခန်း။ အခြားသူများကို 'ရိုင်းစိုင်းသောအိပ်မက်များထက် ကျော်လွန်. ။
တိုးတက်မှု။ အစားအစာ။ quests ။ သင့်ရဲ့အလုပ်လုပ်နေရာ၏အကြိုက်ဆုံးအမျိုးအစားများ။ ထို့ပြင်ငြိမ်းချမ်းရေး, F.
ငြိမ်းချမ်းရေး, သေခြင်း, Google Play Pass ဖြင့်ရနိုင်သည်။
ဘာအသစ်လဲ Peace, Death! 1.9.17